သတိရပါတယ် ဂျီးဇက်ရယ် | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်ချောနွယ် - ဆေးစစ်ခံတဲ့ည
နရီမင်း - "သမိုင်းဝင်နွား"
ခက်ဦး - မြည်သံစွဲ ရွှေဝါရောင်
ဒီဇင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၂
ဂျီးဇက် (Jesus) အရှင်ရယ်
သင့်ရဲ့ (God) ဘုရားသခင်ကို
ကျုပ်ရဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်ပါလို့ 
ကျေးဇူးတော် အနန္တပါလို့ 
ကျုပ်တို့ ဘာသာဝင် အချင်းချင်းကြား
အသင့်ရဲ့ တပည့်တွေ ရင်မှာ
ပြည့်နက်ကာ ပွားနေကြတာ တွေ့ တော့
အလွန့် အလွန်ကို လေးစားမိတယ်။
လွတ်လပ်သော ဘဝကို အပြည့်ပေး
ဒါတွေဟာ သင့်မေတ္တာ ရှိန်အဝါတွေပေါ့။
ထွန်းညှိကာ မပူဇော် မပသပေမဲ့
အရှင့်ရဲ့ ကျေးဇူးတော် အဝဝကို
2 Responses to သတိရပါတယ် ဂျီးဇက်ရယ်
Lawt on December 24, 2012 at 2:27 am
Very good perspective and thought! Greatly respect and thank you for your good encouragement for all Burmese.
angel on December 24, 2012 at 3:29 pm